]Nwere ike Ime Machine Supplier & Nkwakọ ngwaahịa Manufacturers | GUANYOU
Ndị ọkachamara nwere ike ime igwe. Lekwasị anya na Ogo ngwaahịa.
2-ibe nwere ike Isi Production Line
Nwere ike ịgbanaka / mkpuchi / kwụsị Line Production
Sistemụ palletizer akpaaka zuru oke
3-ibe nwere ike Isi Production Line
Igwe eji arụ ahụ nwere akụkụ 2 akpaaka
Gburugburu Can Ime igwe
Club nwere ike Ime igwe
Oval nwere ike ime igwe
Mmanya nwere ike ime igwe
Fancy nwere ike Ime igwe
Akpaaka nwere ike ịgbanaka / mkpuchi / ngwụcha igwe
Igwe na-eme mgbanaka
Ihe mkpuchi (mkpuchi / okpu) igwe na-eme ihe
Igwe na-eme ngwụcha
Palletizer akpaaka zuru oke
Palletizer Ọkwa dị ala
Palletizer dị elu
Ndị na-ahụ maka Robotic Palletizers
Ọdụdọ ndọta palletizer
Igwe eji egbutu ụgbọ ala duplex
Igwe egbutu eriri igwe
Igwe eji arụ ahụ nwere akụkụ atọ akpaghị aka
Agba gburugburu nwere ike ime igwe
Agba anọ nwere ike ime igwe
Square nwere ike ime igwe
Igwe na-eme Pail&Drum
Nri nwere ike Ime igwe
Aerosol nwere ike ime igwe
Semi-auto 3-ibe igwe nwere ike isi
Nnukwu okirikiri nwere ike ime igwe
Obere okirikiri nwere ike ime igwe
Igwe nwere ike ime akụkụ anọ
Igwe nwere ike ịgbanaka / mkpuchi / njedebe
anyị na-eme ohere ọ bụla ịbụ CAN
]OTÚ Mgbanwe Ọla Ị Pụrụ&N'ikpeazụ.
3-iberibe nwere ike ahụ ahịrị Site na-eme igwe soplaya
]3-iberibe nwere ike ahụ ahịrị sitere na ime igwe sitere na GUANYOU MACHINERYỤlọ ọrụ SHANTOU GUANYOU MACHINERY CO., LTD. bụ ụlọ ọrụ teknụzụ dị elu nke na-ahụ maka nyocha na mmepe, nrụpụta, ire ahịa nwere ike ịme igwe.Ngwaahịa anyị na-ekpuchi ike mmanya, nri nri, mmiri ara ehi ntụ ntụ nwere ike, ike ikuku aerosol, ike kemịkalụ na izugbe nwere ike wdg.Otu anyị nwere ihe karịrị afọ iri abụọ ahụmahụ na ike ime igwe ubi.
Ọkachamara 2-ibe nwere ike Isi Production Line Na Factory Price
]2-ibe nwere ike imepụta ahịrị ahụ sitere na GUANYOU MACHINERYỤlọ ọrụ SHANTOU GUANYOU MACHINERY CO., LTD. bụ ụlọ ọrụ teknụzụ dị elu nke na-ahụ maka nyocha na mmepe, nrụpụta, ire ahịa nwere ike ịme igwe.Ngwaahịa anyị na-ekpuchi ike mmanya, nri nri, mmiri ara ehi ntụ ntụ nwere ike, ike ikuku aerosol, ike kemịkalụ na izugbe nwere ike wdg.Otu anyị nwere ihe karịrị afọ iri abụọ ahụmahụ na ike ime igwe ubi.
Ahịrị ngwụcha mkpuchi mkpuchi
]Ahịrị ngwụcha mkpuchi mkpuchi sitere na GUANYOU MACHINERYỤlọ ọrụ SHANTOU GUANYOU MACHINERY CO., LTD. bụ ụlọ ọrụ teknụzụ dị elu nke na-ahụ maka nyocha na mmepe, nrụpụta, ire ahịa nwere ike ịme igwe.Ngwaahịa anyị na-ekpuchi ike mmanya, nri nri, mmiri ara ehi ntụ ntụ nwere ike, ike ikuku aerosol, ike kemịkalụ na izugbe nwere ike wdg.Otu anyị nwere ihe karịrị afọ iri abụọ ahụmahụ na ike ime igwe ubi.
Ọdịmma 200 CPM zuru oke-Robot Arm Palletizer akpaaka
]Ọdịmma 200 CPM zuru oke - akpaaka Robot Arm Palletizer sitere na GUANYOU MACHINERYỤlọ ọrụ SHANTOU GUANYOU MACHINERY CO., LTD. bụ ụlọ ọrụ teknụzụ dị elu nke na-ahụ maka nyocha na mmepe, nrụpụta, ire ahịa nwere ike ịme igwe.Ngwaahịa anyị na-ekpuchi ike mmanya, nri nri, mmiri ara ehi ntụ ntụ nwere ike, ike ikuku aerosol, ike kemịkalụ na izugbe nwere ike wdg.Otu anyị nwere ihe karịrị afọ iri abụọ ahụmahụ na ike ime igwe ubi.
]GỊNỊ mere ị ga-eji họrọ anyị?
Ndị ọkachamara nwere ike ime igwe.
N'ime afọ ndị na-adịbeghị anya, ndị otu ahịa anyị nwere ahụmịhe karịa afọ 7 nwere ike ịme igwe, na-ere ngwaahịa anyị ka ọ dịkarịa ala mba 15.
Ụlọ ọrụ anyị na-achọ ịnye ndị ahịa anyị ngwaahịa dị mma na ọrụ ire ere zuru oke.
]Ụlọ ọrụ SHANTOU GUANYOU MACHINERY CO., LTD. bụ ụlọ ọrụ teknụzụ dị elu nke na-ahụ maka nyocha na mmepe, nrụpụta, ire ahịa nwere ike ịme igwe.
]Ngwaahịa anyị na-ekpuchi ike mmanya, nri nri, mmiri ara ehi ntụ ntụ nwere ike, ike ikuku, ike kemịkalụ na izugbe nwere ike ect. Otu anyị nwere ihe karịrị afọ iri abụọ ahụmahụ na ike ime igwe ubi. Anyị nwere igwe na igwe eletriki nke anyị na-emepụta ma na-emeziwanye igwe anyị.
]Kedu ihe onye ahịa nwere ike nweta n'aka anyị.
Akpaaka 10kg/15kg-20kg Square nwere ike ahụ mmepụta ahịrị
]Akpaaka 10kg / 15kg-20kg Square nwere ike imepụta ahịrị mmepụta sitere na GUANYOU MACHINERYỤlọ ọrụ SHANTOU GUANYOU MACHINERY CO., LTD. bụ onye na-emepụta ihe na-emepụta ihe na-emepụta ihe na-emepụta ihe na-emepụta ihe na-emepụta ihe na-emepụta ihe na-emepụta ihe, na-emepụta ihe, ahịa nke nwere ike ịme igwe.Ngwaahịa anyị na-ekpuchi mmanụ nwere ike ịme igwe ma nwee ike ịme igwe maka ihe ọṅụṅụ mmanya, nri nri, mmiri ara ehi ntụ ntụ nwere ike, ike aerosol, ike kemịkalụ na izugbe nwere ike wdg.Na akpaaka pịa ahịrị dị ka klọb nwere ike ịme igwe, oval nwere ike ịme igwe, mmanya nwere ike ịme igwe, ahịrị igwe nkwakọ ngwaahịa zuru oke.Otu anyị nwere ihe karịrị afọ iri abụọ ahụmahụ na nkwakọ ngwaahịa emeputa ubi.
Kachasị mma 18L Square nwere ike imepụta ahịrị n'ahịa India
]18L Square nwere ike imepụta ahịrị sitere na GUANYOU MACHINERYỤlọ ọrụ SHANTOU GUANYOU MACHINERY CO., LTD. bụ ụlọ ọrụ teknụzụ dị elu nke na-ahụ maka nyocha na mmepe, nrụpụta, ire ahịa nwere ike ịme igwe.Ngwaahịa anyị na-ekpuchi ike mmanya, nri nri, mmiri ara ehi ntụ ntụ nwere ike, ike ikuku aerosol, ike kemịkalụ na izugbe nwere ike wdg.Otu anyị nwere ihe karịrị afọ iri abụọ ahụmahụ na ike ime igwe ubi.
265 Round Biscuit nwere ike imepụta ahịrị n'ahịa Indonesia
]Anyị na-enye zuru ezu akpaka 265 okirikiri biscuit ike ahịrị.Site na igwe mkpuchi mkpuchi mkpuchi (ya na curling&flanging - igwe na-akwa akwa na igwe beading, ọrụ ntụgharị-isi.Ikike dị iche iche iji gboo mkpa gị.
Welder akpaaka nwere mpempe akwụkwọ okpukpu abụọ nke akpaaka
]Welder akpaaka nwere onye jụrụ oyi okpukpu abụọ nke akpaaka sitere na GUANYOU MACHIENRYỤlọ ọrụ SHANTOU GUANYOU MACHINERY CO., LTD. bụ ụlọ ọrụ teknụzụ dị elu nke na-ahụ maka nyocha na mmepe, nrụpụta, ire ahịa nwere ike ịme igwe.Ngwaahịa anyị na-ekpuchi ike mmanya, nri nri, mmiri ara ehi ntụ ntụ nwere ike, ike ikuku aerosol, ike kemịkalụ na izugbe nwere ike wdg.Otu anyị nwere ihe karịrị afọ iri abụọ ahụmahụ na ike ime igwe ubi.Uru ngwaahịa1. Omron Sistemu2. Akpaaka Ugboro abụọ mpempe akwụkwọ jụrụ Sistemụ3. Ceramic Rollers4. Sistemụ ntụpọ atọ5. Mercury Free System
]Budata katalọgụ maka imepụta teknụzụ kachasị ọhụrụ ugbu a!